Uyisebenzisa kanjani iFilitha yokuzalwa kwi-Snapchat - Malunga Social Networking
Uyisebenzisa kanjani iFilitha yokuzalwa kwi-Snapchat
Icebo lokucoca ulusu lukaSnapchat sele liyindlela eyaziwayo yokudala eyahlukileyo, yokubhiyozela imifanekiso yemihla yokuzalwa kunye nemiyalezo yabasebenzisi kunye nabahlobo babo. Umsebenzi unceda abasebenzisi ngokubakhumbuza ngeentsuku zokuzalwa zabahlobo kwaye ubakhokelele ukuba bathumele ii-snaps zokubhiyozela ngokukhethekileyo Usuku olunye kuphela lokucoca ulwelo . Kulula kakhulu ukungena kumnandi!
Ukucwangciswa kweMpawu zokuzalwa
Umsebenzi wokuzalwa kukaSnapchat uvumela abasebenzisi ukongeza iifilitha ezimbini ezikhethekileyo. Enye inokusetyenziselwa ukongeza i-confetti yedijithali kwiifoto, ngelixa enye ivumela abasebenzisi ukuba bazi izihlobo zabo zokuzalwa ngokubeka ikhekhe emojis ecaleni kwamagama abo. Unokuphinda kabini ucofe kwaye uthumele ngokuzenzekelayo iifoto zokuzalwa kubahlobo bakho.
Uyicima njani i-Snapchat
Izizathu ezi-5 kufuneka ubekhona kwi-SnapChat
Sebenzisa i lokuzalwa lokucoca ulwelo , Kuya kufuneka wenze ukhetho kwi-app ye-Snapchat.
Vula usetyenziso uye kwi 'Useto.'
Qinisekisa ukuba i-Snapchat ihlaziywa kuhlobo lwamva nje.
Khetha 'iAkhawunti yam' kwaye ucofe ku 'Usuku lokuzalwa.'
Nje ukuba usuku lokuzalwa luchaneke, hit 'Kulungile.'
Thepha i icon yegiya kuseto
Ukwenza isihluzo sokuzalwa sobuNtu
I-Snapchat yenza ukuba ikhawuleze kwaye ibelula ukwenza isihluzo sosuku lokuzalwa usebenzisa i Inkqubo yamanyathelo amane kwiwebhusayithi yabo . Kuya kufuneka ungene ukuze usebenzise eli nqaku.
Faka okanye uyilo: Khetha 'Imihla yokuzalwa' phantsi ko 'Uyilo olukwi-Intanethi' kwaye uyile isihluzi sakho, okanye ulayishe enye osele uyenzile kwiFotohop okanye kwi-Illustrator. Iifilitha ezilayishiwe kufuneka zibe ngamaphikseli angama-1080 ububanzi ngo-1920 iipikseli eziphakamileyo, zigcinwe njengefayile yePNG enemvelaphi ebonakalayo, kwaye ibe ngaphantsi kwama-300 KB ngobukhulu.
Yenza isihluzo sakho ngokwezifiso kwi-intanethi
Khetha imihla: Khetha ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24 ukuqala ngomhla wokuzalwa kwakho, kubandakanya i-AM / PM kunye nomhla.
Khetha iNdawo: Khetha geofence apho isihluzo sakho sinokusetyenziswa ngomhla wokuzalwa kwakho. Ukwenza njalo, yenza iRhombus kwimephu ngokunqakraza ukuphindaphinda. I-geofence kufuneka ibe phantsi kweenyawo ezingama-50 ezigidi zeenyawo (malunga ne-1.8 yeekhilomitha).
Ngenisa: Emva kokujonga isishwankathelo seodolo, uya kucelwa ukuba ufake ulwazi lokuhlawula kwifilitha yakho, enokuthi ibe sezantsi njengeedola ezintlanu. Nje ukuba ungenisiwe, i-geofilter yakho inokuthatha iintsuku ezininzi ukuze yamkelwe, ke yithathele ingqalelo.
Ukuqinisekisa ukuba i-Snapchat iyasivuma isihluzo sakho, thintela ukubandakanya iidilesi zewebhu, iifoto zabantu, iidilesi zesitalato, inhlamba, imifanekiso engafanelekanga, amagama okugqibela okanye ii-hashtag. Imvume elindelekileyo evela kwi-Snapchat, ungaqala ukusebenzisa isihluzo sakho sokuzalwa ngexesha nakwindawo oyimisileyo.
Nokuba uhlala usazi usuku lwakho lokuzalwa olusondeleyo kunye noluthandekayo ngentliziyo okanye ulibale de kube ngumzuzu wokugqibela, uSpapchat usigubungele. Ukubhiyozela usuku lwakho lokuzalwa okanye unqwenela abahlobo kakuhle, izihluzo zemihla yokuzalwa zivumela ukuba wongeze ubuchule, uvumele umntu ukuba azi ukuba ucinga ngazo. Jonga ifayile Iphepha le-On-Demand Geofilters kwiwebhusayithi yeSnapchat ukufumana izimvo ezininzi zokucoca ulwelo.
Ezishicilelweyo Ne Coloring Pages I-Senior Fashion And Izinwele Iitattoo Izixhobo E Izixhobo Ulutsha Nesikolo Ukuhombisa
Abasetyhini abangcwele abangcwele kunye neentsingiselo zabo
ulisonge njani iphepha libe yincwadi
Ufunda njani ukwenza umhlana obuyileyo
yintoni oyinika isipho sokubhaptizwa